Ahia ahia gi na ire ahia gi dika Osimiri | Martech Zone
Friday, July 3, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Nwere oge magburu onwe ya n'ụtụtụ a na-ekwu okwu na Lorraine Ball. Lọ ọrụ Lorraine bụ ọkachamara na atụmatụ nke ọdịnaya maka obere azụmaahịa na ọkara Indianapolis - gụnyere ịde blọgụ, akwụkwọ akụkọ na mgbasa akụkọ. Lorraine abụwo nnukwu onye nkwado na di ya Andrew bụ ezigbo nwoke na omenka dị egwu.
Mụ na Lorraine enweela ohere ịrụ ọrụ maka nnukwu ụlọ ọrụ, mana anyị hụrụ obi ụtọ na obi ụtọ nke obere azụmaahịa. Lorraine na-agba ume ya niile interns na-arụ ọrụ maka nnukwu azụmahịa ruo ọtụtụ afọ… M ga-akwado ya dị ka nke ọma. Ihe mmuta banyere ndi isi na nnukwu ulo oru nwere ike idi nkpa mgbe ha na eme obere ahia.
N'ime azụmaahịa buru nnukwu ibu, iji nọgide na-arụpụta ihe, ị ga-ekenye ndị isi ọrụ ọrụ. Ndị nlekọta na-eme ọhụụ nke ndị isi na nyochaa ndị ọrụ. Ndị njikwa na-edozi ihe ndị dị mkpa ma wepụ ihe mgbochi. Ndị nduzi na-enyere aka ịnọgide na-enwe ọhụụ ogologo oge ma hụ na ngalaba ahụ na-anọ n'okporo ụzọ ahụ. Ndi osote onye isi ala na-emepụta ọhụụ ogologo oge na atụmatụ nke ndị otu. Ndị folks na nduzi kachasị elu, kwalite, cheerlead, ma lekọta azụmaahịa ahụ.
[Foto si na a ndabere dị na Gnome]
Lorraine ji ihe atụ mara mma bịa. Bụ onye isi na ụlọ ọrụ dị ka ịchịkwa osimiri. Ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkwụsị osimiri ahụ, ị ​​ga-abanye n'ime nsogbu! Ieslọ ọrụ nwere ọkụ… ị na-aga ime ka nnukwu ọgbaghara ma ọ bụrụ na ị na-nanị na-agbalị ịtụba dams ma ọ bụ redirect mmiri ebe ọ na-achọghị ịga. Micromanaging osimiri ahụ agaghị arụpụta ihe ọ bụla mana ọgbaghara.
Ebumnuche nke onye ndu ahụ kwesịrị iji ike mmiri mee ka mmiri ahụ na-aga ebe ọhụụ chọrọ. Onye ndu ọ bụla na nzukọ ahụ na ndị otu ha na ndị ọrụ ha bụ ngwaọrụ iji gbanwee ike ahụ. Ọ chọrọ onye ndu imeghari, inye ike, na inyefe ọrụ ndị dị mkpa… ma gaa n'ihu na-ele anya na ihu igwe na ebe ụlọ ọrụ na-aga.
Nke a adịghị ka Social Media na Online Marketing. Mgbasa ngwa ngwa ewuru na usoro mgbanwe na-agbanwe agbanwe nwere ike ibute obere nsonaazụ ebe a. Atụmatụ dị ogologo oge nke na-eme ka onye ọ bụla nwee ike maka ike ya, na-ekenye ya n'ụzọ ziri ezi, nwere ike iduzi mmiri nke ụlọ ọrụ gị. Osimiri ga-aga n'ihu na-aga n'ike dị egwu… Ajụjụ a bụ ma ị ga - ejide ike ahụ ma ọ bụ lụso ya ọgụ!